चिनियाँ विमान प्रयोग गरी सगरमाथाको सर्भे ! - Sagarmatha Online News Portal
चिनियाँ विमान प्रयोग गरी सगरमाथाको सर्भे !
काठमाडौं । नेपाली आकाशमा अहिले चिनियाँ विमान फाट्टफुट्ट उडेको देख्न सकिन्छ । तर, ती व्यावसायिक वा चार्टर्ड उडान भने होइन ।
अन्य कुनै उद्देश्य नभई सगरमाथाको उचाइ लिनका लागि चिनियाँ विमान आकाशमा उडेका नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । चीनले आफ्नो क्षेत्रबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सर्वेक्षण सुरु गरेको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
दुईदेशबीचको कूटनीतिक सम्झौतापछि सरकारको निर्देशनमा नै सगरमाथा क्षेत्रमा चिनियाँ सर्वेक्षण विमान उडानका लागि अनुमति दिइएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
चिनियाँ साइडबाट सर्वेक्षणका लागि दुई सेप्टेम्बर ३० देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि दोस्रो चरणको समय निर्धारण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि सफा मौसम आवश्यक पर्ने भएकाले पहिलो चरणअन्तर्गत अहिले चीनको साइडबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम भइरहेको बताउँदै पोखरेलले सर्वेक्षणका लागि उडान हुने समयमा काठमाडौं विमानस्थललाई टावर सम्पर्क कार्यालय तोकिदिएको जानकारी दिए । नेपालमा वर्षायाम सुरु हुने भएकाले जुन २० देखि उता सेप्टेम्बर २९ सम्म सगरमाथा उचाइ मापनको काम रोकिने बताइएको छ ।
यता, नेपालको साइडबाट पनि सर्वेक्षणको काम २०७६ पुसतिर नै सकिएको नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिए । २०७४ माघबाट समरमाथाको विभिन्न कोणबाट उचाइ नाप्ने काम सुरु गरिएको थियो । सगरमाथाको उचाइ नाप्न नेपालले यसपटक परम्परागत र आधुनिक विधि गरी दुवै विधि अपनाएको उनको भनाइ छ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्दछ । हाल सगरमाथको उचाइ ८,८४८ मिटर रहेको छ । सो उचाइको मापन सन् १९५२ देखि १०५४ सम्म छिमेकी मुलुक भारतमा बेलायती उपनिवेशको सरकारको समयमा भएको थियो । सर्भे अफ इन्डियाका बी.एल गुलाइटीको समूहले गरेको यो मापनलाई अहिलेसम्म विश्वले नै मान्यता दिइरहेको छ । त्यसपछिका समयमा पनि विभिन्न मुलुकले सगरमाथाको उचाइको मापन गरेको भए पनि अपानाइएका विधिका कारण तीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको पाइँदैन ।